Magaalaan Naqamtee Waraana Agaazii Wayyaaneen Jeeqamaa Jirti. | QEERROO
Magaalaan Naqamtee Waraana Agaazii Wayyaaneen Jeeqamaa Jirti.
Posted on September 8, 2016 by Qeerroo
Fulbaana 8,2016 Warraaksi biyyoolessaa diddaa gabaa lagachuudhaan wal qabatee torbee kana magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee keessatti daran jabaatee itti fufuurraan kan ka’e mootummaan gabroonffattuun Wayyaanee rifannaa guddaa keessa seenuudhaan uummata magalaa Naqamtee fi naannoo ishee irratti dhukaasa banaa jira.
Hanga ammaattis dhukaasa mootummaan gabroonffataan Wayyaanee uummata gaaffii mirgaa gaafachaa jiru irratti bansiiseen lubbuun namoota lamaa irbaata rasaasaa ta’e akka jiru bira ga’amee jira.
Kanneen du’an keessaa kan maqaansaanii nu ga’e:
1,Eebbaa waaqjiraa Bakka dhalootaa magaalaa Siree akka ta’es bira ga’amee jira.
Haaluma Kanaan Yeroo ammaa kanas mootummaan Wayyaanee lafa seentu dhabdee oliif gadi waraanashee uummata magaalichaarra naannessuudhaan uummata doorsisaa jirti. Gidduuma kana dargaggoonni magaalaa naqamtee sabboontota ta’anis mana hidhaatti akka darbataman bira ga’amee jira. Kanneen keessaa:
1,Dargaggoo heenok Tananyee 2.dargaggoo muluqan bootee.
yeroodhaf maqaa abbaa issanii baruu hin dandeenye. Dargagooni kun gidduuma kana poolisota federaalattin marfamanii magaalaa naqamtee keessaa naannoo bakka jaamaa jedhamuu butamanii achi buuteen isaanii dhabamee jira.